ပုံမှန် Alarm တွေအစား Spotify ကသီချင်းတွေနဲ့ နှိုးထနိုင်တော့မယ့် Google Clock App
1 Aug 2018 . 10:31 AM
မနက်တိုင်း အလုပ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းသွားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းနဲ့ Alarm ပေးထားတတ်ကြမှာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဖုန်းမှာပါဝင်္ငတဲ့ Alarm Ringtone တွေမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် သီချင်းတွေနဲ့ နှိုးထရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဆိုပြီး တွေးခဲ့ဖူးပါသလား?
အခုအချိန်မှာ Google Clock ရဲ့ Update အသစ်နဲ့အတူ အခု Feature က တကယ်ဖြစ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ Google Clock ကို နောက်ဆုံး Update Version ကို Update လုပ်ပြီးတာနဲ့ Alarm အတွက် Ringtone ရွေးတဲ့နေရာမှာ ဖုန်းမှာပါဝင်တဲ့ Default Ringtone တွေအပြင် Spotify ထဲက သီချင်းတွေကိုပါ ရွေးချယ်နိုင်ပါပြီ။
Google Clock Spotify Integration
အခုလိုမျိုး Spotify က Google Clock မှာ Integration ပါဝင်လာတာက အရမ်းကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့ လက်တလောမှာ နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းတွေကိုတောင် Recommend ပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု Feature ဟာ ဒီအပတ်အတွင်းမှာ Google Play Store ကနေ Update ပြုလုပ်ပေးပြီး Android Version 5.0 Lollipop နဲ့အထက်ရှိတဲ့ Devices တွေအကုန်လုံးအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခု Feature ရဲ့ နောက်ထပ်အားသာချက်ကတော့ မနက်တိုင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Spotify Playlist ထဲက သီချင်းတွေနဲ့ နိုးထလာဖို့အတွက် Spotify ကို Premium Subscription ဝယ်ထားဖို့ မလိုအပ်ဘဲ Free User တွေပါ အသုံးပြုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Google ဟာ ဘာကြောင့် စစခြင်း ဒီလို Music Alarm Feature ကို Play Music ဒါမှမဟုတ် YouTube Music မဟုတ်ဘဲ Spotify နဲ့ စတင်သလဲဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပေမယ့် ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့ Spotify ကလက်ရှိအချိန်မှာ နားဆင်သူအများဆုံး Music Streaming Service ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Google ကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ တခြားသော Music Streaming Service တွေကိုပါ ထည့်သွင်းသွားဖို့ ရှိနေတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
မနကျတိုငျး အလုပျသှားဖို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ ကြောငျးသှားဖို့ပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ရဲ့ စမတျဖုနျးနဲ့ Alarm ပေးထားတတျကွမှာပါ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ဖုနျးမှာပါဝင်ျငတဲ့ Alarm Ringtone တှမေဟုတျဘဲ ကိုယျ့စိတျကွိုကျ သီခငျြးတှနေဲ့ နှိုးထရရငျ ဘယျလောကျကောငျးမလဲဆိုပွီး တှေးခဲ့ဖူးပါသလား?
အခုအခြိနျမှာ Google Clock ရဲ့ Update အသဈနဲ့အတူ အခု Feature က တကယျဖွဈလာပွီပဲဖွဈပါတယျ။ လကျရှိ Google Clock ကို နောကျဆုံး Update Version ကို Update လုပျပွီးတာနဲ့ Alarm အတှကျ Ringtone ရှေးတဲ့နရောမှာ ဖုနျးမှာပါဝငျတဲ့ Default Ringtone တှအေပွငျ Spotify ထဲက သီခငျြးတှကေိုပါ ရှေးခယျြနိုငျပါပွီ။
အခုလိုမြိုး Spotify က Google Clock မှာ Integration ပါဝငျလာတာက အရမျးကိုကောငျးမှနျပွီးတော့ လကျတလောမှာ နားထောငျဖွဈနတေဲ့ သီခငျြးတှကေိုတောငျ Recommend ပေးသှားဦးမှာဖွဈပါတယျ။ အခု Feature ဟာ ဒီအပတျအတှငျးမှာ Google Play Store ကနေ Update ပွုလုပျပေးပွီး Android Version 5.0 Lollipop နဲ့အထကျရှိတဲ့ Devices တှအေကုနျလုံးအသုံးပွုနိုငျမယျလို့ သိရပါတယျ။
အခု Feature ရဲ့ နောကျထပျအားသာခကျြကတော့ မနကျတိုငျးမှာ ကိုယျ့ရဲ့ Spotify Playlist ထဲက သီခငျြးတှနေဲ့ နိုးထလာဖို့အတှကျ Spotify ကို Premium Subscription ဝယျထားဖို့ မလိုအပျဘဲ Free User တှပေါ အသုံးပွုနိုငျတာပဲဖွဈပါတယျ။
Google ဟာ ဘာကွောငျ့ စစခွငျး ဒီလို Music Alarm Feature ကို Play Music ဒါမှမဟုတျ YouTube Music မဟုတျဘဲ Spotify နဲ့ စတငျသလဲဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပမေယျ့ ဖွဈနိုငျတာတဈခုကတော့ Spotify ကလကျရှိအခြိနျမှာ နားဆငျသူအမြားဆုံး Music Streaming Service ဖွဈနတောကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ Google ကတော့ နောကျပိုငျးမှာ တခွားသော Music Streaming Service တှကေိုပါ ထညျ့သှငျးသှားဖို့ ရှိနတေယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။